gaabinta : Rudesdal
aasaasay : 1965
Ardayda (qiyaastii.) : 32000
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of California, Irvine
Qor at University of California, Irvine
University of California, Irvine waa hay'ad dawladeed oo la asaasay 1965.
Fiiga waxbaridda ee University of California, Irvine waa $38,000 (Aprox.).
On qoraxdu ka campus of University of California, Irvine, ardayda aan haysan meel fog si ay u tagaan decompress ka dib markii fasalka. Badweynta Pacific waa safar 5-mile deg deg ah iska, jiidanaya surfers, badmaax oo ceed si isku mid ah. Fadhiisanayso County Orange, campus u cammiran hoy u tahay in ka badan 500 ururada ardayga, oo ay ku jiraan ku dhowaad 50 fraternities iyo faraternitis. The UC-Irvine Anteaters tartami at Division aan barbareeyo in Shirka West Big, farxo on by Ooyintii non-dhaqameedyada Peter Anteater iyo koox ka mid ah taageerayaasha ardayga loo yaqaan cuna Nation. Iyadoo UC Irvine loo yaqaan dugsiga rakaabka ah, saraakiisha jaamacadda ayaa isku dayay in lagula dagaalamo xaaladda in ay bixinayaan in ka badan fursadaha on-campus joogitaanka. Ardayda loogama baahna in ay ku noolaadaan on campus, laakiin in ka badan saddex-afar ka mid ah-sano marka hore ardaydu doortaan inay sidaa sameeyaan. Helitaanka agagaarka UC Irvine waa u fududahay la ZotWheels dugsiga ee, raxan buluug ah iyo dahab baaskiilada in ardayda kor u qaadan kartaa oo kortaan ilaa afar goobood campus. Rakaabka oo raadinaya in ay tamar ku ool ah wata kartaa in campus ardayda kale ee jaamacadda Zimride Rideshare Community.
hay'ad cilmi baaris ayaa ku takhasustay meelaha sida kansarka iyo neuroscience waxbarashada oo kaashanaya la UC Irvine Medical Center heer sare kaalinta. Barnaamijyada Graduate yihiin heer sare ah loo arkaa at UC Irvine, aad, Ma qurbaanno la qaaska ah ee Merage School Paul ee ganacsiga iyo Samueli School Henry ee Engineering. Jaamacada ayaa sidoo kale kasbaday abaalmarino waayo tallaabooyinka ay soo kobcaya, saaxiibtinimo, kor u qaadida dadaallada cagaaran iyada oo kooxaha ardayga sida Anteaters ee Recycling iyo Ilaalinta. Qalinjabiyeyaasha caan UC-Irvine ka mid ah hore “Saturday Night Live” Jilaaga Jon Lovitz, Greg Louganis, afarta jeer medality dahab Olympic ee lagu boodo, iyo qoraaga Alice Sebold, kuwaas oo qoray “Lafaha kufaraxsanahay The.”
Macluumaad & Computer Sciences
The University of California, Irvine ayaa ka mid ahaa saddex University of California dhismaha cusub ee la aasaasay 1960 under Master Plan California ee Tacliinta Sare la theSan Diego iyo Santa Cruz campuses.During 1950, Jaamacadda California arkay baahida loo qabo dhulka dhismaha cusub in ay la tacaalaan labada tiro badan oo ah ruug-college-ku xidhay dagaalkii labaad ee dunida (inta badan ay sabab u tahay G. waxaan. Bill) iyo kororka la filayo ee diiwaangelinta ka kaca ilmaha post-dagaal. Mid ka mid ah dhismaha cusub ee ahaa in ay ku sugan degaanka Los Angeles; meesha uu soo xulay ahaa Irvine raraya Xirmada, meel ka mid ah dhulka beeraha bisecting County Orange waqooyi ilaa koonfur. Boggan waxa loo doortay inay ka qaybgalaan dadka kordhaya gobolka, dhameystir koritaanka dhow UCLA iyo UC Riverside, iyo in dhismaha bulshada sayidkiisa qorsheeyay a dhacay degaanka ku hareereysan.
Mid ka mid ah labadan calaamo Rudesdal isku wajihi in xarunta weyn’ galo galbeedka.
Si ka duwan University ugu kale ee dhismaha California, Rudesdal, lama odhan jiray, waayo, magaalada waxaa lagu dhisay; waqtiga la aasaasay jaamacadda ee (1965), magaalada hadda Irvine (daro in 1971) ma jiraan. magaca “Irvine” waa tixraac si James Irvine, nin oday ah oo ay maamusho ee 94,000-acre (38,000 waxa uu leeyahay) Irvine raraya Xirmada. In 1960, Company Irvine ayaa iibin 1,000 acres (400 waxa uu leeyahay) of raraya Xirmada Irvine u University of California, waayo, mid dollar, tan iyo siyaasadda shirkad mamnuuc deeq hantida in hay'ad dadweyne. Jaamacadda ayaa soo iibsatay dheeraad ah 510 acres (210 waxa uu leeyahay) in 1964 guryaha iyo ganacsiga horumar. Inta ugu badan ee dalka in aan la iibsaday by Rudesdal (oo hadda degan magaalooyinka dalka Irvine, Tustin, Newport Beach, iyo Newport Coast) ayaa haatan qabtay Company Irvine ayaa. Inta lagu jiro wakhtigan, University ayaa sidoo kale soo kiraystay William Pereira iyo Associates sida Qorsheeyaha Master of degaanka Irvine raraya Xirmada ah. Pereira loogu talagalay campus UC Irvine ah in la dhamaystiro bulshada deriska ah, iyo laba koray ee kala dhantaalay. Wax yar ka dib UC Irvine furay 1965, Magaalada Irvine ayaa noqday mid lagu daro oo la aasaasay 1971 iyo 1975, siday u kala horreeyaan.
marka hore UC Irvine ayaa Chancellor, Daniel G. Aldrich, horumariyo campus ah’ Qorshaha waxbarasho ee ugu horeysay ku dhawaad ​​College of Arts a, Waraaqaha, iyo Science, School Graduate ah Maamulka, iyo School of Engineering ah. The College of Arts, Waraaqaha, iyo Science waxaa ka kooban labaatan heerkoodu sareeyo in shan “Divisions”: Biological Sciences, Arts Fine, Humanities, Physical Sciences, iyo Social Sciences (taas oo loo beddelaa ee-maalinta la joogo “Dugsiyada”). Aldrich sidoo kale wuxuu ahaa masuul ka ah hirgelinta kala duwan ballaaran dhirta iyo ugaarta on campus ah oo ku haboon cimilada zone Mediterranean deegaanka, dareen in ay u adeegi jireen ah “bilicsanaanta, deegaanka, iyo waxbarashada [Ujeedada].”
On June 20, 1964, xoreeyo. Madaxweyne Lyndon B. Johnson ka go'an UC Irvine dadkii badnaa ka mid ah ka hor inta 15,000 dadka, iyo October 4, 1965 campus ka bilaabay howlgallo la 1,589 ardayda, 241 xubnaha shaqaalaha, 119 awood, iyo 43 caawiyeyaasha cilmiga. Si kastaba ha ahaatee, badan oo ka mid ah dhismayaasha ee Kobenhagen ayaa weli ka yar dhismaha iyo muuqaalka weli joogay horumarka, la campus kaliya ee 75% dhamaystirka. by June 25, 1966, Rudesdal qabtay ay bilaabaan marka hore la afar iyo toban ardayda, kaas oo la hadlay toban Bachelor of Arts degrees, saddex Master of Arts degrees, iyo mid Doctor of Philosophy degree.
In 1965 College California ee Medicine (asal ahaan dugsiga ah osteopathy aasaasay 1896 iyo kuliyadaha ugu da'da weyn si joogto ah oo ka hawlgala caafimaad ee Southwest ah) qayb ka noqday ee UC Irvine.
In 1976, ayaa qorshaynaysa in la dhiso isbitaal ku-campus ayaa meel iska dhigeen, iyadoo jaamacadda halkii iibsiga Medical County Orange Xarunta (baxshay ee UC Irvine Medical Center) ku dhowaad 12 miles ka UC Irvine, Magaalada Orange.
Ma rabtaa wada hadlaan University of California, Irvine ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of California, Irvine rasmiga ah Facebook
University of California, dib u eegista Irvine
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of California, Irvine.
jaamacadaha kale ee United States of America
Jaamacadda New York New York City
Lehigh University Beytlaxam